ဂုဏဝိသိဋ္ဌ ဘွဲ့ပူဇော်ပွဲ ပြုလုပ်ကျင်းပမည်
ဗုဒ္ဓစင်တာ(မော်စကို) ဖွင့်ပွဲသို့တက်ရောက်ခဲ့သော ဆရာတော်ကြီးများ
ဗုဒ္ဓစင်တာ(မော်စကို)တွင် တည်ထားကိုးကွယ်မည့် ရွှေစည်းဂုံ ပုံတူစေတီတော်
Myanmar Culture Center နှင့် Theravada Buddhist Society ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခွင့်ပြုခြင်း
မြန်မာထေရဝါဒဗုဒ္ဓ၀ိဟာရ(မော်စကို) တွင် ရွှေစည်းခုံစေတီတော်ကြီး တည်ထားကိုးကွယ်ရေးအတွက် သီတဂူဆရာတော်ကြီးမှ ၂၂.၂.၂၀၁၇ နေ့၊ ဗိုလ်စိန်မှန်ကွင်းတွင် အထူးဓမ္မ သဘင်အခမ်းအနားတစ်ရပ် ကျင်းပကာ ပရိတ်သတ်ဗိုလ်ပုံ အလယ်တွင် ရုရှားနိုင်ငံ၊ မော်စကိုမြို့တွင် ရွှေစည်းခုံ စေတီတော်ကြီး တည်ထားကိုးကွယ်သွားမည့် အကြောင်း တိုင်းသိပြည်သိ စတင်မိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။ စေတီတော်ကြီး တည်ထားရေးအတွက် ပထမဦးဆုံး အဆင့်အနေဖြင့် မြန်မာထေရဝါဒဗုဒ္ဓ၀ိဟာရ(မော်စကို) တွင် ရုရှားလူမျိုးများကို ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ပတ်သက်သော သင်တန်းများ ပို့ချခြင်း၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာများနှင့် မိတ်ဆက်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ဝင်စားမှု မြင့်တက်လာစေရန်နှင့် ယင်းနှင့် ဆက်စပ်၍ မြန်မာထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းကြီး တစ်ရပ်အောင်မြင်စွာ ဖွဲ့စည်းခွင့် မှတ်ပုံတင်ရရှိနိုင်ရေးအတွက် ရုရှားလူမျိုးများပါ စိတ်ဝင်တစား ပါဝင်လာကြနိုင်ရေး စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရန်နှင့် မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှု ဆိုင်ရာ အခမ်းအနားများ၊ သင်တန်းများ၊ အခြား လှုပ်ရှားမှုများကို ရုရှားလူမျိုးများပါ ပါဝင်ပြီး တရားဝင်လုပ်ဆောင်ခွင့် ရရှိနိုင်ရန် အချိန်တိုအတွင်း မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုချက် ရရှိနိုင်သည့် စီးပွားရေး အကျိုးအမြတ်မယူသည့် (Non Commercial Organization) တစ်ခုမှတ်ပုံတင်နိုင်ရန် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ ကြပါသည်။
အသင်းဖွဲ့စည်းမှုအား မှတ်ပုံတင်ရန် ရှေ့နေရုံးမှတဆင့် တရားရေးဝန်ကြီးဌာနမှသို့ ၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လ (၃၁)ရက်နေ့တွင်ပေးပို့ ခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် မေလ (၁၇)ရက် တရားရေးဝန်ကြီးဌာနဆုံးဖြတ်ချက်အရ ဖွဲ့စည်းခွင့်ကျခဲ့ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာ -
(ကက) ဒေါက်တာ အရှင်အစ္ဆရိယ ဥက္ကဌ (ခခ) အရှင် နန္ဒမာလာလင်္ကာရ အဖွဲ့ဝင် (ဂဂ) ဦးတင်ယု အဖွဲ့ဝင် (ဃဃ) ဦးတင်ဇော် အဖွဲ့ဝင် (ငင) မစ်စတာ အီးဂေါ ကာလာရှညီကော့ဗ် အဖွဲ့ဝင် (စစ) မစ်စတာ အလက်ဇန်းဒါး လာပါကျင် အဖွဲ့ဝင် (ခခ) အမည် - မြန်မာ ယဉ်ကျေးမှုစင်တာ (Autonomous Non-Commercial Organization “Myanmar Cultural Center”). (ဂဂ) နေ၇ာ - မော်စကိုပြည်နယ်၊ ဘာလာရှီဟာမြို့၊ ဘလာဂျီမီစကာရာလမ်း၊ ခြံအမှတ် ၁၀၁ (ဃဃ) အသင်းရံပုံငွေ - ၁၀၂၀၀ ရူဘယ် (ငင) ဘဏ်အကောင့်အမှတ် - 40703810738000009191(စစ) အသင်းစာရွက်စာတမ်းကိစ္စဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ရန်ကိုယ်စားလှယ် - မစ်စတာ အီးဂေါ ကာလာရှညီကော့ဗ် (ဆဆ) အသင်းဖွဲ့စည်းခွင့်ကျသောရက် - ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၀၅)ရက် (စစ) အသင်းဖွဲ့စည်းခွင့်အမှတ် - ၁၁၇၅၀၀၀၀၀၂၇၁၅
Theravada Buddhist Society အားလည်းဖော်ပြပါအဖွဲ့ဝင်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည် (ကက) Mrs. Orlova Natalia Vladimirovna (ခခ) Mr. Orlov Alexander (ဂဂ) Mr. Kalashnikov Igor Gennadievich (ဃဃ) Mrs. Maksaeva Anna Eduardovna (Chairman) (ငင) Mr. Kalachev Pavel Yurievich (Deputy Chairman) (စစ)Mr. Smirnov Vladimir Fedorovich (ဆဆ) Mr. Perera's Mupasiri Hettiarachchige (ဇဇ) Mr. Asurov Maxim Andreevich (ဈဈ) Mr. Pinegin Andrey Yurievich (ညည) Mr.Kulikov Kirill Aleksandrovich (ဋဋ) Mrs. Zaw Irina Sergeevna
Myanmar Culture Center
Сhairman - Dr. Ashin Acchariya, +79854450075 ၊Vice Chairman - Ashin Nandamarlarlankara, +79163232099 (nandamarlarlankara2015@gmail.com) ၊Сhief accountant - Mr. Kalashnikov Igor Gennadievich - +79857663198 (sanda3599@gmail.com) ၊Secretary - Dr.Zaw Ye Aung - + 79251553799 (alexanderzaw.bmstu@gmail.com)
Theravada Buddhist Society
Chairman - Mrs. Zaw Irina Sergeevna (+ 79206122346)(irinazaw@buddhacentre.com)(tbs@buddhacentre.com) ၊Duputy Chairman - Mr. Kalachev Pavel Yurievich (+79623622728)(pavelkalachev@buddhacentre.com)
Address (place) of the Society’s location:
Moscow region, city of Balashikha, Vladimirskaya street, 101
(သီတဂူစန်းလပမာ ချမ်းမြသာယာရှိကြပါစေ) ၊ ဗုဒ္ဓစင်တာ-မော်စကို။
မြန်မာသံအမတ်ကြီး မိသားစုတို့မှ နေ့ဆွမ်းကုသိုလ်
မြန်မာစစ်သံမှူး(ကြည်း၊ရေ၊လေ) မိသားစု နေ့ဆွမ်းကုသိုလ်
စစ်တက္ကသိုလ် အပါတ်စဉ် (၅၅) ကျောင်းဆင်း ( ၅ ) နှစ်ပြည့်ဆွမ်းကပ်
စစ်တက္ကသိုလ် အပါတ်စဉ် (၅၁) ကျောင်းဆင်း ( ၉ ) နှစ်ပြည့်ဆွမ်းကပ်
စစ်တက္ကသိုလ်အပတ်စဉ် (၄၈) ကျောင်းဆင်းနှစ်ပတ်လည်ကောင်းမှု
စစ်တက္ကသိုလ်အပတ်စဉ် (၄၆)နှင့်အပတ်စဉ် (၄၇) အရာရှိများ၏ကုသိုလ်
စစ်တက္ကသိုလ်အပတ်စဉ် (၅၀) နှစ်ပတ်လည်အလှူ
အထူးပင် ဝမ်းမြောက် ဂုဏ်ယူမိပါကြောင်း
ရုရှားနိုင်ငံ၊ မော်စကိုမြို့၊ မြန်မာထေရဝါဒဗုဒ္ဓစင်တာမှ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တအစ္ဆရိယအား မဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇဘွဲ့တံဆိပ်တော် နှင့် ဒုတိယကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဖြစ်သော ဘဒ္ဒန္တနန္ဒမာလာလင်္ကာရအား သဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇဘွဲ့တံဆိပ်တော် စသည်ဖြင့် ယခုကဲ့သို့ဘွဲ့တံဆိပ်တော်များ အသီးသီးချီးမြှင့်ပူဇော်ခံရသည့်အတွက် တပည့်တော်များကပ္ပိယအဖွဲ့မှ အထူးပင် ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိပါသည် ဘုရား ..။
ရွှေကျင်နိကာယသံဃာ့အစည်းအဝေးတွင် ဒေါက်တာအရှင် အစ္ဆရိယ ၏ မြန်မာထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓစင်တာ(မော်စကို) ၏ သာသနာပြုလုပ်ငန်းများ ဆိုင်ရာ တင်ပြ လျှောက်ထား
၁၃၇၉ ခုနှစ် တပို့တွဲလဆန်း (၁၃) ရက်၊ (၂၉.၀၁.၂၀၁၈) တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ ဓမ္မဒူတဇေတဝန်ကျောင်းတိုက်၊ မဟာဓမ္မဗိမာန်တော်၌ ကျင်းပသည့် ဝီသတိမ အကြိမ် (၂၀)မြောက် ဗုဒ္ဓသာသနာတော်လုံးဆိုင်ရာ ရွှေကျင်နိကာယသံဃာ့အစည်းအဝေးတွင် ရုရှားနိုင်ငံ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာပြု ဗုဒ္ဓစင်တာ(မော်စကို) ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဒေါက်တာအရှင် အစ္ဆရိယ မှ ရုရှားနိုင်ငံအတွင်း မြန်မာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဝိဟာရ ကျောင်းတိုက် ဖြစ်ပေါ်လာပုံ သမိုင်းအကျဉ်း၊ ရုရှားနိုင်ငံအတွင်း ရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာအခြေအနေ၊ ဗုဒ္ဓစင်တာ (မော်စကို) ၏ ပြုလုပ်ပြီး၊ ပြုလုပ်ဆဲ၊ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သွားမည့် သာသာနာပြုလုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လျှောက်ထားခဲ့ပါသည်။ (စာတမ်း - အပြည့်အစုံ) https://www.facebook.com/Acchriya/posts/1973635805997261
1st International Conference on Buddhist Culture and Civilization
ပထမဆုံးအကြိ်မ်ကျင်းပသည့် 1st International Conference on Buddhist Culture and Civilization- 2018 ကို အောင်မြင်စွာကျင်းပ နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲမစခင်က အနည်းငယ် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိခဲ့သော်လည်း အထူးဧည့်သည်တော်များရော ဖိတ်ကြားထားသူများပါ စုံလင်စွာတက်ရောက် စကားပြောကြားခဲ့ကြသည့်အတွက် အားလုံးရဲ့ကိုယ်စား ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အစည်းအဝေးဟု မဆိုနိုင်စေကာမူ မိမိတို့ရဲ့အင်အားနဲ့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လက်တွဲဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အစည်းအဝေးအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်နိုင်ရေးအတွက် တက်ရောက်ချီးမြောက်ပေးခဲ့ကြသော
- ဦးကိုကိုရှိန် ၊ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာသံအမတ်ကြီးနှင့် သံရုံးမိသားစု
- ဗိုလ်မှူးမျိုးမင်းထိုက်၊ လက်ထောက်စစ်သံမှူး နှင့် စစ်သံရုံးမိသားစု
- အစည်းအဝေးဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ကျရာကဏ္ဍမှာ တာဝန်ကျေပွန်စွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည့် သင်တန်းသားအရာရှိများအား ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါတယ်။ အထူးအားဖြင့် ယခုအစည်းအဝေးဖြစ်မြောက်အောင် အစအဆုံးတာဝန်ယူဦးဆောင်စီစဉ်နိုင်ခဲ့သည့် ဗိုလ်မှူးကျော်မြတ်သူအား အစည်းအဝေးဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီများကိုယ်စား ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုလိုက်ရပါသည်။
…. သူတော်ကောင်းတရား နေရာတိုင်းမှာ ထွန်းတောက်နိုင်ပါစေ ……
Myanmar Theravada Buddhist Center,Moscow
Details: | Published: 03 January 2018
Сhairman - Dr. Ashin Acchariya, +79854450075 (acchariya@buddhacentre.com)
Vice Chairman - Ashin Nandamarlarlankara,+79163232099 (nandamarlarlankara2015@gmail.com)
Сhief accountant - Mr. Kalashnikov Igor Gennadievich,+79857663198 (sanda3599@gmail.com)
Secretary - Dr. Zaw Ye Aung ,+79251553799 (alexanderzaw.bmstu@gmail.com)
Chairman - Mrs. Zaw Irina Sergeevna,+ 79206122346 (irinazaw@buddhacentre.com)(tbs@buddhacentre.com)
Duputy Chairman - Mr. Kalachev Pavel Yurievich,+79623622728 (pavelkalachev@buddhacentre.com)
Moscow region, city of Balashikha, Vladimirskaya street,101
Buddha Centre Moscow Facebook Page